Ny zotram-piaramanidina Lufthansa Group dia manampy sidina vaovao 440 any Etazonia, Espaina, Portugal ary Scandinavia ho an'ny Krismasy sy Taom-baovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny zotram-piaramanidina Lufthansa Group dia manampy sidina vaovao 440 any Etazonia, Espaina, Portugal ary Scandinavia ho an'ny Krismasy sy Taom-baovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny zotram-piaramanidina Lufthansa Group dia manampy sidina vaovao 440 any Etazonia, Espaina, Portugal ary Scandinavia ho an'ny Krismasy sy Taom-baovao.
Any Eoropa, ireo toerana any amin'ny tanibe Espaniola sy ny Nosy Canary, Portiogaly ary ireo toerana misy masoandro hafa any amin'ny faritr'i Mediterane sy Skandinavia dia tena ilaina tokoa.
Avy any amin'ny foibeny any Munich sy Frankfurt irery, Lufthansa dia manolotra sidina fanampiny mihoatra ny 120 misy seza 25,000 mandritra ny vanim-potoana Krismasy.
Any Etazonia, New York ary ny toerana haleha any amin'ny fanjakan'i Florida dia voafandrika matetika.
Miaraka amin'ny fandrindrana ny mpandeha an'habakabaka dia tokony handinika amin'ny toe-javatra tsirairay ny lalànan'ny fidirana amin'izao fotoana izao sy ny confinement.
Ny sidina an'ny Vondrona Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ary Eurowings) dia manolotra seza fanampiny manodidina ny 80,000 amin'ny sidina fanampiny 440 ho an'ny fotoam-pialan-tsasatra sy taom-baovao ho avy. Ny zotram-piaramanidina izao dia mamaly ny fitomboan'ny fangatahana sidina nandritra ny herinandro nandritra ny fialan-tsasatra amin'ny alàlan'ny fanohizana ny toerana haleha sy ny fampitomboana ny fatran'ny fifandraisana efa misy na ny fandefasana fiaramanidina lehibe kokoa.
Avy amin'ny foibeny any Munich sy Frankfurt irery, Lufthansa dia manolotra sidina fanampiny mihoatra ny 120 mahazaka seza 25,000 mandritra ny vanim-potoana Krismasy.
Any Etazonia, New York ary ny toerana haleha any amin'ny fanjakan'i Florida dia voafandrika matetika. Any Eoropa, ireo toerana any amin'ny tanibe Espaniola sy ny Nosy Canary, Portiogaly ary ireo toerana misy masoandro hafa any amin'ny faritr'i Mediterane sy Skandinavia dia tena ilaina tokoa. Ho fanampin'ireo toerana ireo dia miverina amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina ireo toeram-pialan-tsasatra azo antoka amin'ny ranomandry any Lapland (avaratr'i Failandy). Noho izany dia tonga amin'ny fotoam-pialan-tsasatra sy taom-baovao avy any Frankfurt Ivalo sy Kuusamo ary koa avy any Munich Kittilä any Lappland sy Tromsö any Norvezy - Northern Light inclusive.
Afaka mamandrika avy hatrany ny sidina rehetra. Miaraka amin'ny fandrindrana ny mpandeha an'habakabaka dia tokony handinika amin'ny toe-javatra tsirairay ny lalànan'ny fidirana amin'izao fotoana izao sy ny confinement.
Ny mpandeha dia afaka mandray anjara manokana amin'ny fiarovana ny toetr'andro ary manao ny diany an'habakabaka CO2 tsy miandany. Ho fanampin'ny safidy hanonerana ny sidina amin'ny alàlan'ny tetikasa toetr'andro avo lenta, ny vahiny ao amin'ny Lufthansa dia efa afaka manidina miaraka amin'ny solika maharitra ankehitriny. Ny airlines an'ny Vondrona Lufthansa dia nampiditra ny safidy ao amin'ny dingana famandrihana. Afaka mahita azy ireo ao amin'ny app Miles & More ny mpitsikilo matetika.